Amagama aqanjwa noma adalwa ngababhali | Izincwadi Zamanje
Amagama aqanjwa noma adalwa ababhali
UJoaquin Garcia | | Abalobi, Literatura, eziningana
Muva nje uhlelo olukhuluma isiNgisi lubiziwe Ingqondo Floss ukhiphe uhlu oluthokozisayo lwamagama abalobi abalusungulile noma abalusungulile. Kuluhlu lwamagama angama-43, amancane kancane kunenani leminikelo elenziwe yi-Arabhu eSpain, kepha angamagama athakazelisa kakhulu futhi lokho kuzokuheha nakanjani.
Ngakho kunamagama athakazelisayo afana nelirobhothi, igama elisetshenziswa kabanzi namuhla kepha obekusungulwe ngumbhali. Kwenzeka okufanayo ngamagama afana naphakathi noma i-twitter. Igama lokuqala lasungulwa nguTolkien lapho ekhuluma ngoFrodo emsebenzini wakhe. Leli gama laqala ukusetshenziswa olimini lwesiNgisi ezinganeni ezineminyaka ephakathi kwengu-10 nengu-12 ubudala.
Into enelukuluku ngakho konke lokhu ifana nolimi lwesiNgisi, yize singenaso isikhungo esilawula ulimi, inani lamagama asunguliwe mancane, isimo esifana nesimo seSpanish nokuthi sine-Academy iyayihlanza, iyilungise futhi iyinike ubukhazikhazi.
I-Freelance ingelinye lamagama amaningi aqanjwa ngababhali
I-Utopia, Yahoo, Twitter, Nerd, Cyberspace, Pandemonium, njll. ngamanye amagama angidonsele amehlo kulolu hlu, kodwa-ke leli eliwina lo mklomelo elithi "Freelance", leli gama livele okokuqala emsebenzini kaWalter Scott, igama elalikhuluma ngabanumzane ababezisebenzela i-akhawunti.
Yize amanye ala magama ngokuqinisekile ubuvele wazi noma ucabanga ukuthi ababhali bawasungulile, njengegama elithi Utopia noma abesilisa nabesifazane, ngokuqinisekile bambalwa abebecabanga ukuthi igama elifana ne-Yahoo selivele likhona, kudala ngaphambi kwenkampani edumile ye-Intanethi noma i-Twitter.
Ngakho-ke ngikumema ukuthi ubuke ividiyo enohlu lwamagama aqanjiwe futhi ungagcini ngokunikeza umbono wakho kepha futhi wethule namagama aqanjwe ababhali futhi angakhulunywa kulolu hlu Wake wamangala nganoma yini? Ubuwazi noma yini efakiwe kuvidiyo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Amagama aqanjwa noma adalwa ababhali
Iseluleko sikaJulio Cortázar sokubhala izindaba
Buyekeza: "Ummeli Ovikelwe", nguJames Nava